विचार/ब्लग Archives - Page 70 of 71
बालकृष्ण घिमिरे- दुध र दुग्धजन्य पदार्थ जाडो मौसममा स्वत चिसो हुने भएका कारणले होला पन्चानब्ये प्रतिशत बिग्रदैन र अनुगमन गर्ने निकायहरु निस्कृय बस्ने गर्दछन | तर जब गर्मि मौसम सुरु भयो तव विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरु सकृय भएको देखाउन थाल्दछन । कारण दुध र दुग्धजन्य पदार्थ जाडो मौसममा भन्दा गर्मि मौसममा…
चन्द्र बिश्वकर्मा, तितोपाटी - मुस्लिम समुदायको रमजान अर्थात् एकमहिने व्रत रोजा आज बाट सकिएको छ । ईद पर्व १४३९ कुवेत लगायत अन्य गल्फ राष्ट्रमा भोलि मनाउने भएको छ । ईद इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व हो । यसलाई ईद उल फित्र पनि भनिन्छ । यो पर्व इस्लामिक मुलुकहरू लगायत नेपाल, भारत…
विदेशी भूमिमा पसिना बगाँउने, तर देशमा केही नगर्ने प्रवृत्ति वढी भयो- व्यवसायी शिवदेव पाण्डे
अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेवमा जन्मीएका एक युवा । आफ्नो व्यवसाय सँगसँगै विभिन्न सामाजिक काममा सक्रिय व्यक्तीत्व । आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँन सफल । एक सफल व्यवसायीसँग उहाँको व्यक्तिगत जिवन सहित समसामाहिक विषयमा हिन्दुखबर डटकमका सम्पादक घनश्याम पौडेलले गरेको कुराकानीको अंश १. तपाईको परिचय दिनुहोस न ? – सर्वप्रथम सम्पुर्ण सामाजिक सञ्जाल…
युवा शत्ति बिभिन्न देशमा पलायन भईरहेका बेला मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले बिभिन्न तालिम दिएर यहि दक्ष जनशत्ति उत्पादन थालेको छ । महिलाहरुलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले स्वारोजगार मुलक तालिम दिन थालेको छ । बिभन्न वडा तथा नगरले छुटाछुटै तालिम दिन थालेको हो । जुता चप्पल बनाउने देखि खाजा बनाउने तालिम समेत नगरपालिकाले…
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विकास र समृद्धिको नाममा सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको बताएका छन् । सरकारले अहिले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिने काम गरिहेको उनको आरोप छ । बिराटनगरस्थित आफ्नो निवासमा बुधबार बिहान सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै डा. कोइरालाले भने, ‘वर्तमान सरकारले बिकास र समृद्धिको नाममा न्यायपालिका,…
बबिता बस्नेत - सोसियल मिडियामा अहिले तीनवटा भिडियो एकैसाथ भाइरल भइरहेका छन्, नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले आफ्नो कार्यालयमा कफी पोखिएपछि आफैँले मोप्ट लगाएर सफा गरेको दृश्य, अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफू राष्ट्रपति हुँदा हवाईजहाजबाट निस्किँदै गर्दा पानी परेपछि आफूले छाता ओढेको र आफू भिजेर अरूलाई छाता ओढाएको दृश्य र हाम्रा…
नारायण पाेख्रेल - कुवेत क्षेत्रफलको हिसाबले सानो देश भएता पनि सम्भावना र अबसरको हिसाबले बिशाल छ । विश्काव धेरै देशका मानिसहरु यहाँ कामदारको रुपमा आएका छन । नेपालीहरु मात्र ७० देखि ८० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । मानिसहरु कुनै देश ,समाज या ठाउँमा जाँदा उक्त समाजले अंगिकार गरेको…
सुरेन्द्र बस्नेत - यतिबेला बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइले राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रतिक्रिया उब्जिएका छन् । खासगरी गत निर्वाचनवाट नराम्रो हार बेहोरेको कांग्रेसले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाउन उद्धत देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर संसदमा बोल्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘गणतन्त्रको राजा’ बन्न खोजेको आरोपसम्म लगाउन भ्याए । उता…
शुभेच्छा विन्दु तुलाधर - केही समय भयो, नेपालमा अचानक जसरी नै बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। र, समाज सचेत भएका कारण त्यसविरुद्ध प्रदर्शन तथा खबरदारीका कार्यक्रमहरू पनि प्रशस्तै भएको देखियो। यस पटक यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू राजधानी काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई मोफसलका जिल्लाहरूमा पनि विस्तार भएको पाइयो। तर यो विरोध प्रदर्शनमा भने…
अमृता लम्साल - म केटाकेटी हुँदा घरमा वस्तुभाउ थिए। तिनको घाँटीमा बाँधिएको दाम्लो किलामा ठोकेर राखिन्थ्यो या गोठालाका साथ लगाएर चर्न छाडिन्थ्यो। एकदिन, यी दुवैबाट चुकियो। भैंसी छुटेछ। पल्ला घरको मकैबारी फाँडेर केही बाँकी राखेन। ओल्लोघर, पल्लोघरले नराम्रै मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। धेरै वर्षअघिको भए पनि आजभोलि यो घटना मेरो दिमागले झक्झकाइरहन्छ।…